विर्सने बानी छ ? दिमाग तेजिलो ६ खानेकुरा - Safalnews
विर्सने बानी छ ? दिमाग तेजिलो ६ खानेकुरा
सफल न्युज द्वारा २०७७ कार्तिक १० गते सोमबार ०७:१८ मा प्रकाशित
के तपाईंलाई विर्सने समस्याले सताएको छ । बढी भुल्ने र विर्सने समस्या छ । छ भने तपाईको खान्कीमा पौष्टिक तत्वको अभाव रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
दही-दहीमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, चिल्लो, क्याल्सियम तथा फोस्फोरस जस्ता लवणहरु पाइन्छ । यसले सरीरमा लाभदायी जिवाणुलाई समेत फाइदा पूराउँछ भने हानिकारक जिवाणुलाई नष्ट गर्न सहयोग गर्छ । दहीमा एमिनो एसिड पाइन्छ जसले दिमागी तनाव कम गरी स्मरण शक्तिमा बढोत्तरी गर्न सघाउ पूराउँछ ।
टाउको दुखिरहन्छ ? भान्छामै भेटिने यी औषधी गर्नुहोस् प्रयोग
यी हुन खाली पेटमा खान नहुने खानेकुरा